Maxkamadda Caalamiga ee Cadaalada ee ICJ ayaa diiday dalab uga yimid Kenya oo ay ku… – Hagaag.com
Maxkamadda Caalamiga ee Cadaalada ee ICJ ayaa diiday dalab uga yimid Kenya oo ay ku…
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaalada ee ICJ ayaa gaashaanka ku dhufatay dalab uga yimid Kenya oo dooneysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda kala dhexeysa Soomaaliya.
Ujeedka arrintan ay u codsadeen ayay ku sheegeen sababo la xiriira cudurka Covid-19 oo saameyn weyn ku yeeshay howlihii diyaargarowga kiiska ee ay wadday Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go’aanka ka soo baxay maxkamadda. Ra”isal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleeed ayaa sheegay in Soomalaiya ay diyaar u tahay ka qeybgalka dhageysiga oo qaab fogaan-arag ah lagu qaban doono.
Maxkamaddu waxa ay shegetay in sidoo kale tiro xaddidan lo oggoalan doono inay hoolka maxkamadda joogana inta uu socdo dhageysiga.